समानान्तर Samanantar: कांग्रेसको आत्मा
कांग्रेसको आत्मा त डा. शशाङ्ककै घरमा रहेछ कि कुन्नि त्यहाँ आज देखिएका अनुहारले पुराना दिन सम्झाउँथे । गिरिजाबाबु धेरै िबरामी भएपछि डा शशाङ्ककोइरालाको महाराजगंजस्थित घरबाट सर्नुभयो । मलाई नयाँ डेरामा जाने खण्डै परेन । संस्थागत काम वा बोलाएका बेलाबाहेक २०४६ सालपछि म नेताहरूको घर वा नेपाली कांग्रेसकाे कार्यालयमा गएको छैन । दोस्रो जनआन्दोलनपछि कुन्नि किन सत्तासँग नजिकिनै मन लागेन । बीचमा पत्रकारितामा सक्रिय हुँदा धेरै िहमचिम बढाउनु उिचत पनि लागेन । यसपटक नागरिकबाट िबदा पाएपछि बोलाएका ठाउँमा गएको छु । नेपाली कांग्रेससँग प्रत्यक्षपरोक्ष सम्बन्ध भएका केही कार्यक्रममा उपस्थित भएँ । धेरै नयाँ अनुहार भेटिए पनि अझै चिनिएका अनुहार भेटिने रहेछ ।
आज (आइतबार) पनि एउटा कार्यक्रममा सहभागी त नभनौ उपस्थित हुने मौका पाएँ । पुराना साथी वीरेन्द्र दाहालले बोलाएपछि अल्छी लागे पनि नाइँ भन्न सकिन । निर्वाचनमा विजयी लाेकतन्त्रवादी प्राध्यापकको स्वागतमा डाक्टर शशाङ्क कोइरालाको घरैमा कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो । उपस्थिति राम्रो थियो । भीमबहादुर तामाङलगायत वरिष्ठ नेताहरू थिए । नवनिर्वाचित पदाधिकारी त थिए नै अरू पनि धेरै देखिए । कांग्रेसप्रति नयाँ पुस्ताको आकर्षण पनि बाँकी रहेको देखियो ।
शीर्ष नेताहरूप्रति धेरैले आक्रोश पोखेको सुनियो । कांग्रेसमा पनि 'सप्रे दोषादोष बिग्रे खोसाखोस ' गर्ने पंचायतको रोग सल्केको छ । अलिअलि तेस्तै पनि भयो । तर त्यहाँ पुग्दा कताकता उहिल्यै जयवागेश्वरी र पछि त्यही घरमा पुग्दाको अनुभव भयो । कांग्रेसको आत्मा त्यही घरमा भएजस्तो । दक्षिण एसियाली राजनीतिक परम्परा नेपालमा पनि चरितार्थ हुने हो भने कांग्रेसलाई पुनर्जीवन दिन कोइराला निवासले नै नेतृत्व लिनुपर्छ । कोइराला निवासका उत्तराधिकारी डाक्टरहरू शेखर र शशाङ्क कोइराला चिकित्सा छाडेर राजनीतिमा आइसकेका छन् । पुर्खाको बिँडो थाम्लान् त ?
Posted by govinda adhikari at 10/14/2012 07:00:00 PM